ललितपुरका पुराना स्मारकको पर्खाल भत्काएर खुला गरिँदै :: Setopati
ललितपुरका पुराना स्मारकको पर्खाल भत्काएर खुला गरिँदै
समिक्षा अधिकारी ललितपुर, पुस ६
पुल्चोकस्थित इञ्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान। स्रोतः विकिपेडिया
ललितपुर महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका सार्वजनिक स्थल तथा भवन खुला गर्न थालेको छ। पुराना तथा ऐतिहासिक महत्व बोकेको सार्वजनिक भवन तथा स्थान घेरेर बनाइएका पर्खाल भत्काएर सर्वसाधारणलाई भित्रका दृश्य देखाउने महानगरको तयारी हो।
यो योजनाअन्तर्गत पहिलो चरणमा पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेज, जावलाखेल फुटबल मैदान, लगनखेल फुटबल मैदान घेरेर बनाइएका अग्ला पर्खाल भत्काउन लागिएको हो। यसमध्ये पुल्चोक कलेजको पर्खाल भत्काउने काम भइरहेको ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनले जानकारी दिए।
‘पुल्चोकको पर्खाल भत्काउने काम तीन हप्तामा सकिन्छ,’ मेयर महर्जनले भने, ‘जुन ठाउँ अहिले पर्खालले घेरेको छ, त्यहाँ राणाकालीन दरबार, पोखरी, हरियाली बगैंचा, पानीका फोहोरा छन्। त्यस्तो ठाउँलाई अब छोपेर, लुकाएर राख्न हुँदैन।’
काठमाडौं उपत्यकामै सार्वजनिक जग्गा भेट्न मुस्किल छ। ललितपुर महानगरले आफूसँग भएको सीमित सार्वजनिक स्थललाई भरपुर सदुपयोग गर्न यस्तो योजना लागू गरिएको मेयर महर्जनले बताए।
‘हामीसँग खुला स्थान छैनन् भन्दा पनि हुन्छ, त्यसैले भएकालाई सदुपयोग गर्न खोजिएको हो,’ उनले भने ‘अहिलेलाई पर्खाल भत्काएर भित्र हेर्न मिल्ने बनाइनेछ।’
पुल्चोक कलेजकै सन्दर्भमा सर्वसाधारणलाई पर्खाल भित्र के छ थाहै छैन, अन्दाज पनि छैन सायद।
मेयर महर्जनले भने ‘आजसम्म नदेखेका मौलिक, कलात्मक, मनमोहक दृश्य अब हामीले दिनहुँ हेर्न सक्छौं। अवलोकन गर्न सक्छौं।’
पर्खाल भत्काइने भनिरहँदा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा जस्तो आवतजावत गर्न मिल्ने गरी खुला बनाउन लागिएको भने होइन। भत्काइएको पर्खालको ठाउँमा फेरि फलामे डन्डी राखिनेछ, जस्तो टुँडिखेलमा छ। भित्र हेर्न मिल्छ तर निश्चित ठाउँबाहेक अन्तबाट पस्न मिल्दैन।
हिँडडुल गर्न नपाएपछि कसरी खुला भयो त?
‘हेर्न मात्र मिल्छ, जथाभावी हिँडडुल थालियो भने आन्तरिक संरचनामा असर पुग्न सक्छ,’ उनले भने, ‘पस्न नपाए पनि ती खुला स्थान नै हुनेछन्।’
लगनखेल र जावलाखेलको खेल मैदानमा पनि यसै गरिने मेयर महर्जनले जानकारी दिए।
बार (फेन्स) प्रविधि अपनाएर क्याम्पस हाता सुरक्षित गरिनेछ। नयाँ बनाइने बारको डिजाइन समेत तय भइसकेको छ। यसका लागि पुल्चोक कलेजमा इन्जिनियरिङ अध्ययनरत विद्यार्थीबीच सामूहिक प्रतिस्पर्धा भएको थियो। प्रतिस्पर्धाबाट उत्कृष्ट भएको समूहले तयार गरेको डिजाइन अनुसार नयाँ संरचना निर्माण हुनेछ।
वर्षौं बन्द रहेका ठाउँ एकाएक खुला रहँदा केही समस्या आउलान् कि?
‘समस्या वा सुरक्षाको कुरा गर्दा अमेरिकाको ह्वाइट हाउसलाई लिउँ। संसारको सबभन्दा शक्तिशाली व्यक्ति बस्ने ठाउँ हो। तै पनि त्यहाँ फेन्स लगाइएको छ। विशाल पर्खाल नभएकै कारण कुनै समस्या आएको छैन,’ मेयर महर्जनले भने।
यो योजनाले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक वृद्धि हुने विश्वास रहेको मेयर महर्जन बताउँछन्।
प्रकाशित मिति: आइतबार, पुस ६, २०७६, ०५:४०:००